Umbhidlango wokulwa nobugebengu ngamaholidi | News24
Umbhidlango wokulwa nobugebengu ngamaholidi
PHOTO: nokuthula khanyile UKhansela ku-ward 15 uJabulani Nene.
AMAPHOYISA esiteshini sasePlessislaer ngokuhlanganyela nezinye izinhlaka ngoLwesithathu olwedlule aphume umkhankaso wokuqwashisa ngobugebengu njengoba kusondele isikhathi samaholidi kaKhisimusi.
Ngeviki eledlule lamaphoyisa ahambele ezindaweni ezahlukene ngaphansi kwe-Plessislaer okubalwa i-Peaceville, Ashdown, Caluza, Edendale, Dambuza, Pata kanye neMbali exwayisa amalungu omphakathi ngobugebengu obuvamise ukwenzeka ngezikhathi zamaholidi.
Kulomkhankaso kuphinde kwanikezwa amalungu omphakathi izinombolo okumele azisebenzise njengoba kuza isikhathi samaholidi.
Umphathi siteshi wasePlessislaer uBrigadier Mduduzi Shezi uthe baxwayisa amalunga omphakathi ukuba avule amehlo ikakhulukazi labo abazobe behlukanisa izimali zesitokofela.
“Siyabaxwayisa ukuthi bangaphathi imali budedengu okungenani bazise amaphoyisa uma benokusaba noma kukhona izinto ezenza basole ukuthi kukhona ubugebengu obungenzeka. Sikhuthaza ukuthi basebenzise izindlela eziphephile zokucaza imali njengokuthi ifakwe kuma akhawunti abo asebhange ingacazwa bukhoma.”
UShezi uthe phakathi kobunye ubugebengu obudlangayo ngalesikhathi sokunyaka ukugqekeza njengoba abantu besuke besemaholidini kanye nokudlwengula.
“Abantu abaningi baphuza utshwala badle nezidakamizwa okugcina kuholele ekutheni benze izinto eziphambene nomthetho bagcine sebezithola sebesenkingeni. Sixwayisa abezindawo zokucima ukoma ezingekho emthethweni ukuba bazivale noma babhekane nengalo yomthetho. Nabazophuza sicela bangashayeli ngoba lokho kubeka izimpilo zabanye abashayeli engcupheni,” kusho uShezi.
Lombhidlango uphelele endaweni yase Fedsem lapho kwadutshulwa khona amalunga amabili e-ANC ngaphambi kokhetho lohulumeni basekhaya ngo Agasti 3.
Ikhansela ku-ward 15 uJabulani Nene unxuse amalunga omphakathi ukuthi abambisane namaphoyisa ukuze kugcine kuboshwe ababulali.
“Sicela umphakathi ubambisane namaphoyisa kanye nekhomishana esungulwe undunankulu ukulwisana namacala okubulala enzeka siya okhethweni.
“Siyacela nalabo abanolwazi ngalesigameko baphumele obala babikele amaphoyisa.”
Njengoba kuqhubeka nomkhankaso wezinsuku ezingu 16 zokuvikelwa kwabantu besifazane nezingane uNene unxuse ukuba kubikwe ukuhlukumezeka kwabo nanoma ngabe iyiphi indlela.
“Uma uthandana nomuntu wesifazane siyacela ungamhlukumezi nakulabo ababona izigameko zokuhlukunyezwa kwabantu besifazane nezingane siyacela ukuba bazibike emaphoyiseni ukuze labo abathintekayo beyothola usizo nabahlukumezi baboshwe.”
Uphinde wanxusa amalunga omphakathi ukuba abike labo abadayisela intsha izidakamizwa.